HomePage - Run With Tech
भारतीय चर्चित गायिका संजीवनीले किरण बाबुसंग गाएको दोहोरी एकै दिनमा बन्यो भाइरल- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
रविले यसो भनेपछि भावुक बने ज्ञानेन्द्र शाही ! रवि पनि मैदनामा ! हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
खुशीको खबर ! नेपाललाई उपहार स्वरुप अहिलेसम्मकै ठूलो राशीको ‘सरप्राइज’ !
महरालाई महिलाको म्यासेज : ‘तँ न माफीको लायक भइस्, न मायाको लायक’ (भिडियो सहित)
पोखरामा आज भएको सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको निधन भएको छ । पोखरा–२६ सुन्दरी बजारमा जीप र स्कुटर एकापसमा ठक्कर खाँदा पोखरा–२७ आदर्शचोक बस्ने स्कुटर चालक वर्ष २५ का हिमाल गुरुङ र पछाडि बसेका सोही
काठमाडौं । जनताले नेताहरुको सम्पतीका बारेमा त समयसमयमा जानकारी पाउँछन् । तर, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको सम्पतीबारे कमैलाई जानकारी हुन्छ । अहिलेको प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आज राजधानीमा एक
महिलामाथि यौ*न दुव्र्यवहारको आरोपपछि समामुखबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। संसदमै कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले आइतबार राति आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागएपछि नेकपाले नै उनलाई सभामुख र संसद दुबैबाट
तोया दाहाल अमेरिका । २७ वर्षीय नेपाली युवती सुनिता लिम्बुले सानफ्रानसिस्को स्थित आफ्नै कोठामा झुण्डिएर आत्महत्या गर्नु अगाडि दुई वटा पानामा सुसाइड नोट लेखेको अमेरिकी प्रहरीले फेला पारेको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको सुसाइड नोटको
राजीनामा दिएका सभासद कृष्णबहादुर महरा र पीडित भनिएकी महिला रोशनी शाहीबीचको भाइबर म्यासेजको केही सन्देश सार्वजनिक भएको छ । हाम्रा कुरा डटकम अनलाइनले रोशनी शाहीसँग गरिएको कुराकानीको दोस्रो अंश सार्वजनिक गरेको छ । ७ मिनेट